सोह्र श्राद्ध शुरू, के गर्ने के नगर्ने ? | दर्पण दैनिक
सोह्र श्राद्ध शुरू, के गर्ने के नगर्ने ?
प्रकाशित मिति: २०७८ आश्विन ५ गते ०१:४६
काठमाडाैं । मंगलवारदेखि पितृपक्ष अर्थात सोह्र श्राद्ध शुरु भएको छ । यसबेलामा केही काम अवश्य गर्नुपर्छ र केही काम पटक्कै गर्नु हुँदैन । यी कुरामा ध्यान दिनुस् । श्राद्ध आफ्नै घरमा गर्नुपर्छ, अर्काको घरमा गर्न निषेध छ । श्राद्धमा तीन वस्तु पवित्र मानिन्छ : छोरीको छोरा (नाति), दिनको आठौं भाग र कालो तिल । श्राद्धमा तीन प्रशंसनीय कुरा छन् : बाहिरी र भित्री शुद्धता, क्रोध नगर्ने र हतार नगर्ने ।
श्राद्धकै दिन कपाल नकाट्नुस् । अघिल्लो दिन मुण्डन गर्नुस् ।
जन्मदिनको अवसरमा बालबालिकालाई न्यायो कपडा र नगद वितरण
२०७८ कार्तिक ९ गते ०८:२५
काठमाडौं । एसोसिएसन अफ एलायन्स क्लबस् इन्टनेसनल डिस्ट्रिक १०२३ अन्तर्गत रहेको एलायन्स क्लब अफ काठमाडौं सिटिका प्रथम भाइस प्रेसिडेन्ट एली सुवर्ण श्रेष्ठको जन्मदिनको अवसर पारी न्यायो कपडा र नगद रकम वितरण गरिएको छ । भैसीपाटीमा रहेको बालसेवा गृहका बालबालिकाहरुलाई सो सहयोग गरिएको हो ।
पोर्चुगलमा ७० भन्दाबढि नेता कार्यकर्ता राप्रपा नेपालमा प्रवेश, देशको नेतृत्व युवा पुस्ताले लिनुपर्नेमा अध्यक्ष तामाङको जोड
२०७८ कार्तिक ४ गते ०६:३०
पोर्चुगल । राप्रपा नेपालका राष्ट्रिय अध्यक्ष आईताराम तामाङले देशको नेतृत्व युवा पुस्ताले लिनुपर्ने बताएका छन् । राप्रपा नेपालले विजया दशमी, दिपावली तथा छठ पर्वको अवसरमा पोर्चुगलमा आयोजना गरेको चियापन तथा शुभकामना आदानप्रदान कार्यक्रमममा उनले यस्तो बताएका हुन् । लाक्पा तामाङ संयोजनमा भएको कार्यक्रम राष्ट्रिय अध्यक्ष तामाङले बुद्धको मूर्तिमा दीप प्रज्वलन गरेर कार्यक्रमको उद्घाटन गरेका थिए ।